क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनले भन्यो- ‘कारवाहीमा परिसकेका व्यक्तिबाट सचेत रहनुहोस’ – purnakhabar.com
सिद्दार्थ माविका भुपु विद्यार्थीहरुले टुहुरा तथा अपांग बालबालिकालाई दिए न्यानोपन!
कार्तिक २७, राेल्पा । सुकिदह उर्फ गंगादेव गाउँपालिका रोल्पामा रहेको सिद्दार्थ मा.वि. घोप्टेओढारकाे ३१ अाैँ बार्षिक उत्सवकाे उपलक्ष्यमा सोमबार अपाङ्ग तथा असाय बालबालिकाहरुलार्इ न्यानाे कपडा वितरण गरिएको छ । सोहि बिद्यालयमा अध्यन गरेका भुपु विद्यार्थीहरुले देउसी भैलाे खेलेर जम्मा गरेको रकमबाट हाल अध्यनरत बालबालिकाहरुलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको हो । तिहारको समयमा घरफर्किएका २६ जना भुपु विद्यार्थीहरुले देउसी भैली खेलेर ३० […]
दशैँ बिशेष चर्चित भनाई: वर्षमा एक पटक भुइँ छाड्नु पर्छ तर कसरी ? हेर्नुहोस
शरद ऋतुमा पर्ने दसैंका बेला मौसम रमाइलो हुन्छ। हरियाली वातावरण, झुलेका धान, बारीका कोदोले गाउँघरका वातावरण मनमोहक बनाएको हुन्छ। चाडबाडको उमंगमा यस्ता वातावरणले झन् रमाइलो थप्ने गर्दछ । चाडबाडको यस्तो रमाइलोमा गाउँघर, बजारमा लगाइने रोटे र लिङ्गे पिङले झन् रौनकता थप्ने गर्दछ। नेपाली समाजमा वर्षमा एक पटक भुइँ छाड्नु पर्छ भन्ने चर्चित भनाइ छ। त्यसैले […]
पुरानो राजा हटेको संबिधान हो यो नयाँ महाराजा अटेको संबिधान हो यो के खुसमा दिवस मान्ने निर्धन वर्गलाई अन्यायले शिर टटेको संबिधान हो यो नदिनाला भरी बिभिन्न बहाना बनाउदै बिदेशमा बेच्न खटेको संबिधान हो यो शान्ति समृद्धिको भ्रम फैलाएर देशमा सेतो आतंकमा डटेको संबिधान हो यो आमा, छोरी, चेलीको रक्षा गर्न नसक्दा नैतिकता झनै घटेको […]
मलेसियाको जेलभित्रै ठगिएका मानिसी काठमाडौंमा दलाल खोज्दै
कामदार ठग्ने कम्पनी फेरि सक्रिय, श्रम मन्त्रालयले दियो कारवाहीको चेतावनी